"तपाइँको सन्देश पठाउन सकिएन" म्याकका लागि सन्देशहरूमा त्रुटि म म्याकबाट हुँ
त्रुटिको समाधान "तपाईंको सन्देश पठाउन सकिएन" म्याकको लागि सन्देशहरूमा
केहि अवसरहरूमा, हामी नियमित प्रयोगकर्ताहरू भने सन्देशहरू हामी भेट्न सक्छौंaपप-अप विन्डो पाठको साथ "तपाईंको सन्देश पठाउन सकिदैन"। यस जानकारीको साथ, प्रयोगकर्तालाई यो बुझाउन दिइन्छ कि अनुप्रयोगमा केही त्रुटि भर्खरै भएको छ। यो सामान्यतया देखा पर्दछ जब हामी हाम्रो म्याक पुनः सक्रिय छ केहि मिनेट वा स्ट्यान्डबाइको घण्टा पछि, वा पुनःस्टार्ट पछि। यो त्रुटि देखा पर्दछ जब सर्भरहरूले सन्देश सही तरीकाले सिंक गरेन। त्यो हो, यो एक प्रकारको "लिम्बो" मा छ जहाँ सम्भवतः सर्भरले तपाइँलाई सन्देश पठाएको भनेर भन्नेछ, तर हाम्रो म्याकमा उस्तै प्रतिक्रिया हुँदैन र समस्या आउँदछ।
उहि समयमा, सन्देशले हामीलाई सोधे, तपाइँ फेरि पठाउन चाहानुहुन्छ? हामी तीन विकल्पहरू फेला पार्दछौं: बेवास्ता गर्नुहोस्, खोल्नुहोस्, वा सन्देश फर्वार्ड गर्नुहोस्। हामी अर्को हेर्नेछौं, यदि तपाईं छनौट गर्नुहुन्छ भने "उपेक्षा गर्नुहोस्" त्रुटि तुरून्त फर्कने सम्भावना छ। विकल्प "सन्देश खोल्नुहोस्" सामान्यतया यसले उही त्रुटिमा तपाइँलाई पनि फर्काउँछ, किनकि यस्तो समस्या आउँदछ किनकि समस्या समाधान गरिएको छैन। विकल्पमा अन्तिम Message सन्देश पुनः पठाउनुहोस् » यद्यपि हामी क्रमिक अवसरहरूमा प्रेस गरे पनि केहि हुँदैन। त्यसो भए कसरी समाधान हुन्छ?
हामीले जाँच गर्नु पर्ने पहिलो चीज हो आईक्लाउड सेटिंग्स y सन्देशहरू। यो गर्नका लागि, हामी सन्देश प्राथमिकताहरू पहुँच गर्छौं र निश्चित गर्दछौं कि म्याक सन्देशहरू पठाउन तयार छ र आईक्लाउडमा जडित छ।
तर अन्य सम्भावित त्रुटि, सम्भवत:aबाट उत्पन्न भयो सन्देशको साथ समस्या सिंक गर्नुहोस्। यस अवस्थामा समाधान छ बारम्बार क्लिक गरेर बेवास्ता गर्नुहोस् जबसम्म एप्पल अनुप्रयोग डिबग समक्रमण समस्या हुँदैन, जुन स्पष्ट रूपमा विभिन्न उपकरणहरू बीच हुन्छ जहाँ हामी समान एप्पल आईडी छ र हामी सन्देश अनुप्रयोगको साथ काम गर्छौं।
आशा छ कि एप्पलमा केटा, केहि थोरै डिबगले यी समस्याहरू। एकै साथ, हामी आशा गर्दछौं कि IOS का मजा लिने सन्देशहरू सुविधाहरू म्याक संस्करणमा समावेश गर्न सकिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » ट्यूटोरियलहरू » त्रुटिको समाधान "तपाईंको सन्देश पठाउन सकिएन" म्याकको लागि सन्देशहरूमा
म सुरूमा प्रश्न चिन्ह र एक फोल्डर देख्छु, म संकेतित चरणहरू अनुसरण गर्दछु तर यसले डिस्क चयन गरेको देखिदैन, म Wi-Fi इन्टरनेट नेटवर्क चयन गर्न देखा पर्दछ, म यसलाई चयन गर्दछु र म यसलाई अनुसरण गर्न दिन्छु र मैले पाउँदछु। विश्व बल मोड, र त्यसपछि चाँडै यो रोकिन्छ र म विश्व बल 6002F मा प्राप्त
एप्पलले टच बार बिना नयाँ म्याकबुक प्रो सुरू गर्ने छ
एप्पलले तपाईलाई मनपराउने एयरपडहरूको लागि नयाँ केसको पेटन्ट गर्दछ